Ooftuu Mudata Maakroosi
Kutaan kun akkaataalee sagantooleen Bu`uura mudatoota sagantati ramadaman ibsa.
Yeroo madatni sooftiweerii ifteessame maakroo barbaadame gara mudatatti ramaduudhaan uumaman ofumaan maakroo hojjoomuun ni danda`ama. Gabateen armaan gadii mudatoota sagantaa fi maakroon ramadame hojii akkamii akkanni hojjomu ilaalcha guddaa kenna.
Maakroon ramadame ni hojjooma...
... fayyadamni LibreOffice booda eegala.
...fayyadamni LibreOffice dura dhaabbata.
...Sajoo Faayilii - Haaraa yookiin Haaraa wajjin galmeen haaraan iddoo uumamee booda.
...Sajoo Faayilii - Bani yookiin Bani wajjin galmeen iddoo banamee booda.
...sajoo (Faayilii - Olkaaa`i Akka , yookiin Faayilii - olkaa`i yookiine Olkaa`i wajjin maqaa ifteessame jalatti galmeen osoo ol hin kaa`amiin dura, yoo maqaan galmee hamma amaatti hin ifteessamne ta`e).
Galmeen kan oltaa`e akka
...sajoo Faayilii - Olkaa'i ykn Olkaa'i wajjin galmeen osoo ol hin kaa'amiin dura, maqaa galmee duraan kenname ifteessama.
...sajoo Faayilii - Olkaa'i ykn Olkaa'i wajjin galmeen osoo ol hin kaa'amee booda, maqaa galmee duraan kenname ifteessama.
...galmeen dura cufama.
Galmeen ni cufama
...galmeen iddoo cufamee booda.yeroo galmeen osoo olhin kaa`amiin cufamu maddi "Galmee Olkaa`i" dabalatan tarii ni uumama.
...galmeen gara fuuldureetti dhufee booda.
...qaaqan Maxxansi iddoo cufamee booda, garuu jalqaba haalla maxxansi sirrii dura.
Dogoggora sa`atii darbee JaavaaSkiriptii
... yeroo dogoggori sa`atii darbee JaavaaSkiriptii uumamu.
Makiinsa Ergannoo Maxxansi
...qaaqan Maxxansi iddoo cufamee booda, garuu jalqaba haalla maxxansi sirrii dura. Maddataan kun tokko tokkoo galagalcha maxxansameef uumama.
Jijjiira lakkoofsa fuulaa
...yeroo lakkoofsa fuulaa jijjiiru.
...yoo Ergaa fudhatame.
Ramada Maakroo mudata
Gabatee Meeshaalee - Maamileesi fi Mudatoota cuuqaasi.
Sanduuqa tarreekeessa olkaa`i galmee ammee kessaa xurbeessaan gataa`aa yookiin gataa`aa sirrii ramadan akka ta`uu yoo barbaade fili.
Tarree Madata keessaa madata fili.
Maakroo cuuqaasuudhaan maakroo gara madata filameetti ramadaman fili.
Maakroo ramaduuf TOLE cuuqaasi.
Qaaqa cufuuf Tole cuuqaasi.
Ramada Maakroo gara Mudatatti siiqsu
Ramada xurbeessaa yookiin ramada gataa`aa galmee ammee keessaa filannoo sanduuqa tarreekeessa olkaa`i kessaa filuudhaan siiqsuuf fili.
Madata ramada tarree Madata keessaa siiqan ofkeessaatti qabatu fili.
Title is: Ooftuu Mudata Maakroosi